Mareykanka Oo Cambaareeyay Wariyaal Lagu Dilay Muqdisho | RBC Radio	Home
Sunday, August 26th, 2012 at 02:25 am	/ 6 Comments Monday, August 13th, 2012 at 04:32 pm Mareykanka Oo Cambaareeyay Wariyaal Lagu Dilay Muqdisho
Nairobi (Radio) Dowladda Mareykanka ayaa si weyn u cambaareysay dilal shaley magaalada Muqdisho loogu geystay labo wariye.
Safiirka u fadhiya Mareykanka magaalada Nairobi, James Swan ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin dilalka joogtada ee lagu hayo wariyaasha ka howlgala Soomaaliya.
War-saxaafadeed uu ka soo saaray danjire Swan xafiiskiisa Nairobi ayuu ku sheegay dowladda Maraykanka in ay wax ka qaban doonto dhaqanka ka jira Soomaaliya ee isla xisaabtan la’aanta dilalka lagu hayo suxufiyiinta Soomaalida.
Danjire Swan ayaa si kulul u cambaareeyay dilkii shalay magaalada Muqdisho loogu geystay Yuusuf Cali Cusmaan “Yuusuf Farey” oo ka tirsanaa ma’uuliyiinta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, oo kooxo hubeysan ay ku toogteyn degmada dharkenley ee Muqdisho.
Mr. Swan ayaa tacsi u diray qoyska, axsaabda iyo dadkii ay wada shaqeyn jireen Yuusuf Farey.
Danjiraha ayaa ugu baaqay dowladda KMG ah ee Soomaaliya inay baaritaan buuxdo ku sameyso dilalkii u dambeeyay ee loo geystay suxufiyiin iyo shaqsiyaad ka shaqeyn jiray warbaahinta Soomaaliya.
Wuxuuna ugu dambeeyn ku nuux-nuuxsaday in dowlada Mareykanka ay sii wadi doonto baaqa ah in caddaaladda la hor keeno kooxaha dambeeya dilalka suxufiyiinta Soomaaliya xitaa marka laga gudbo xilliga KMG ah oo ku eg 20-ka August.
Si kastaba, dilalkii ugu dambeeyay ee shaley loogu geestay Muqdisho labo wariye, waxa sidoo kale cambaareeyay midowga Africa iyo QM.
In ka badan 10-suxufi ayaa lagu dilay Soomaaliya, gaar ahaan caasimada Muqdisho, mana jirto cid loo soo qabtay dilalkaas.
Tags: Mareykanka Oo Cambaareeyay Wariyaal Lagu Dilay Muqdisho	Leave a Reply